नेपाल आज | बिहान आएर ‘घरखर्च गर्न पाइन लौन हजुर’ भन्ने सांसदले दिउँसो समितिमा मेरोविरुद्ध विषवमन गर्थे
बिहान आएर ‘घरखर्च गर्न पाइन लौन हजुर’ भन्ने सांसदले दिउँसो समितिमा मेरोविरुद्ध विषवमन गर्थे
शनिबार, १९ साउन २०७५ गते प्रकाशित - नेपाल आज
‘अर्काको दोष र अर्काले के गर्यो के गरेन भनी हेर्नुभन्दा
आफ्नो दोष र आफूले के गरेँ गरिनँ भनी हेर्नु नै बेस हुन्छ ।’
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछिका केहि वर्षसम्म नेपाली सञ्चारमाथि जनताको विश्वास अचम्मको थियो । सञ्चारका कुनै पनि माध्यमले प्रकाशन अनि प्रसारण गरेका सामग्रीप्रति आम पाठक–श्रोताले आँखा चिम्लिएर पत्याउने दिनहरु थिए ।
म आफैँ सम्झन्छु, पत्रपत्रिकामा छापिएका शब्द, वाक्य हेरेर आफ्नो भाषालाई शुद्ध गरेको । कैयौं पटक सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित, प्रसारित सममग्री आधारमा मैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको अनि कैयौँ विषय र घटनामा आफ्नो विचार बनाएको । अहिले ठीक उल्टो छ । सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशित, प्रसारित सामग्रीका आधारमा मैले आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको अनि कैर्यौ विषय र घटनामा आफ्नो विचार बनाएको । अहिले टीक उल्टो छ । सञ्चारमाध्यमहरु विश्वासनीय छैनन् र अराजक छ तिनले प्रयोग गर्ने भाषा ।
मैले जस्तै धेरै पाठक–श्रोताले सञ्चारमाध्यमका सामाग्रीलाई मानक बनाएर बसेका हुन्छन् त्यसैले विश्वसनीय हुनुपर्छ सञ्चारजगत् । म सम्झन्छु– बहुदल आएपछि ‘घटना र विचार’ मा पुरुषोत्तम दाहालको आवाज वेदमन्त्रजस्तै मानिन्थ्यो सञ्चारजगत्मा । राणा हुँदै पञ्चायतकालमा नेपाली सञ्चारले अनेकौँ कष्ट सह्यो ।
कष्टका बीचबाट पनि स्वतन्त्रता र समानताका लागि आशाको दीप मात्र प्रज्वलित गरेन कि मैदानमै उत्रिएर सङ्घर्ष गर्‍यो । यसैले पनि २०४६ पछि सञ्चारलाई राज्य र समाजबाट निकै ठूलो सम्मान प्राप्त भयो । दुर्भाग्य भन्नुपर्छ समयक्रसँगै नेपाली सञ्चारले आफ्ना् न साख जोगाउन सक्यो न त व्यावसायिक धर्म नै । राजनीतिक दलैपिच्छेका सञ्चारगृह र पत्रकार भएपछि र मूल्य एवम् मान्यताको पत्रकारिता नभएपछि अनि पत्रकारितामा पीतपत्रकारिता घुसेपछि स्वस्खलित भए मूल्य र मान्यता पनि ।
जसले आफ्नो अनुहारमा कालो पोतेर हिँड्छ, उसले अरुको अनुहारको कालो देखाउनु कति सान्दर्भिक हुन्छ ?
अहिलेको सञ्चारको अवस्था लगभग यस्तै छ । सञ्चार आफैँमा एउटा सिङ्गो सूर्य हो । उसका प्रकाशहरु समाजका अनेक साँघुरा गल्लीसम्म प्रवेश गरेका हुन्छन् । सञ्चारको शक्ति कम आँकलन गर्नु पनि अर्को मूर्खता हुन्छ । तर शक्तिशाली मानिएको सम्झिएको पहलवान नशामा लट्ठिएर दीनहीन भएपछि के हुन्छ । नेपाली सञ्चार क्षेत्र पनि कतै यस्तै त भएको छैन् ?
देशको स्थिति र सञ्चारको स्थिति उस्तैउस्तै देख्छु म । जतासुकै भताभुङ्ग मात्र । नेपालीको राजनीति, समाज र कतिपय व्यवसायलाई पत्रकारिताले सिकार बनाएको छ । कतिपय विसङ्गति, विकृतिलाई नेपाली पत्रकारीताको पखेटाले छोपिदिएको छ । जसले गर्दा सञ्चारको विश्वासमाथि प्रश्न ठडिन थालेको छ । मुलुकको कुनै एउटा क्षेत्र स्वार्थको र्‍यालीमा डुब्नु समाजका लागि पक्कै पनि राम्रो होइन ।
भनिन्छ, पत्रकारिता समाजको ऐना हो । यो पनि भनिन्छ, चर्किएको ऐनाले अनुहार राम्रो देखाउन सक्दैन । हेर्नु पनि शुभ होइन । सत्य, तथ्य अनि निष्पक्ष समाचार सञ्चारको मूल मन्त्र हो । मैले थोरै पत्रकारसँग माफी माग्दै भन्नुपर्छ– सत्य, तथ्य र निष्पक्ष भन्ने आदर्शलाई नेपाली सञ्चारकर्मीले आफ्नो स्वार्थको सिकार बनाइसके ।
राज्यको चौथो अङ्ग विकृत हुनु भनेको राज्य विकृत हुनु हो र विरूप हुनु हो राज्यसंयन्त्र पनि । सञ्चारजगत्मा भाइरस पसेपछि कुहिन्छ राज्यको मुटु, पक्षघात हुन्छ राज्यको मस्तिष्क र लङ्गडा हुनछन् राज्यका अङ्ग अवयवहरु ।
पीडा भोग्छ मान्छेले, समस्यासँग जुध्नुपर्छ मान्छेले, आपत्ति आइपर्छन् मान्छेलाई विपत्तिको सामना गर्नुपर्छ मान्छेले र अन्याय तथा अपमान पनि सहनुपर्छ मान्छेले नै । साझा प्रकाशनमा गएपछि यस्तै र यिनै स्थितिहरुसँग जुध्नुपर्‍यो मैले । साझा प्रकाशनमा जानु मेरो लागि समस्यासँग जुध्नुको सिकाइ मात्रै हुँदै थियो । हरेस नखाई संस्थालाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई हारगुहार गर्दै थिएँ । जसका लागि मैले चिनजानका सञ्चारकर्मी मित्रहरुलाई गुहार्दै थिएँ । साझाका घटनाहरु नेपाली सञ्चारका खबर बन्दै पनि थिए । युद्ध जितिएला जितिएला जस्तो अवस्थाको सिपाहीझैँ मैले आफूलाई देखिरहेको थिएँ । आशाका किरणहरू देखिँदै थिए कतै दूरक्षितिजमा ।
२०७४ साउन ५ मा ‘नागरिक दैनिक’को नाम बोकेर दुई युवक साझा प्रकाशनको मेरो कार्यकक्षमा आए । आफ्नो चर्चाभन्दा पनि साझाको चर्चामा लोभिएको म ती युवाहरूलाई साझाका सबै कागजात उपलब्ध गराउँदै साझाका समस्याबारे बताउँदै थिएँ । उनीहरू मेरा कुरालाई बेवास्ता गर्दै मेरो शैक्षिा योग्यताको कुरा गर्न थाले । ‘नबिराउनू नडराउनू’ भनेझै ती विष्णु अर्याल र वसन्त खड्का नामधारी कथित पत्रकारसँग आवश्यक जबाफ फर्काएँ ।
उनीहरू बार्गेनिङ गर्ने अवस्थामा देखेपछि म अझ रूखो बन्न थालेँ । उनीहरूले मलाई दुई दिनको समयसीमा थमाउँदै सोच्न चेतावनीसहितको आग्रह गरे उनीहरूको भावना बुझेर मैले उनीहरुलाई भेट्ने प्रबन्ध मिलाउनु आवश्यक ठानिनँ । पत्रकारिताको लालची भाइरसको एउटा सामान्य नमुना थियो त्यो । अपरिपकव, सञ्चारकर्मीको नियतपूर्ण स्वार्थप्रेरित कार्य कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण बन्दै २०७४ साउन ८ गते ती दुई जनाले साझामा मैले भ्रष्टाचार गरेको भन्ने समाचार प्रकाशन गरे । त्यस समाचारले उनीहरूलाई जति मनोरञ्जन दिलायो, त्यसको हजार गुणा बढी क्ष्ति साझाले बेहोर्‍यो ।
साझा प्रकाशन सिध्याउने शकुनि पासा यसरी पल्टियो पत्रकारितामा । कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै नछामी कागको पछाडि दौडिनु भन्दा कान छाम्नु बुद्धिमानी सम्झिएर मैले समाचारको खण्डन गर्नतर्फ लागिनँ ।
मेरो मौनतालाई ‘नागरिक’ले कमजोरी ठानेर एकपछि अर्का भ्रामक समाचारहरू प्रकाशन गर्न थाल्यो । साझा प्रकाशन सुधारको बाटोलाई चौडा बनाउँदै म निरन्तर अघि बढिरहेँ । साझामाथिको ‘नागरिक’ को शृङ्खलाबद्ध प्रहारको सङ्गीतमा केही कपीपेस्ट अनलाइन पत्रिका नाङ्गै नाच्न थाले । लज्जास्पद थियो त्यो दृश्य ।
साझा बुझेकाहरू एउटा दैनिक पत्रिकाको हर्कत देखेर ‘नागरिक’ माथि दयाभावका टिप्पणी गर्दै मलाई सान्त्वना दिनेगर्थे । यस घटनाले सम्भवतः सिङ्गो नेपाली सञ्चारमाध्यममाथि पनि अनेकौँ प्रश्न उठे होलान् ।
जसले जे गरे पनि हुने र भीडले ताली बजाएर पनि असत्य पनि सत्य साबित हुने परिस्थितिमा ‘नागरिक’को हर्कतप्रति कसले औंला ठड्याउने ?
नेपाली पत्रकारिता कति सत्यहीन, तथयहीन र निष्पक्षहीन अवस्थामा रहेछ भन्ने सानो उदाहरण र नमुना थियो त्यो । यस्तो पत्रकारिताका पछाडि समाजका केही बुज्रुक कसरी दौडिँदा रहेछन्, मैले चलचित्रको अभिनयजस्तो गरी हेरिरहेँ ।
असत्यको खेती गरेर पत्रकारिताको ढोल पिटेकामा सम्पादक गुणराज लुइँटेललाई फोन गरेर भेटेर साझाका सम्पूर्ण कागजातका प्रतिलिपि दिएँ तर उनलाई सत्यतथ्य समाचार भएको भए पो मेरो कागजात महत्वपूर्ण हुने थिए । उनी मादल बजाइरहे घृणित नौटङ्की नाचमा ।
आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएर बाईस महिनादेखि तलबविहीन कर्मचारी पालेको साझाजस्तो संस्थामा भ्रष्टचार भयो भन्दै महत्वपूर्ण स्थान दिएर निरन्तर अतिरञ्जित समाचार प्रकाशन गर्नुले नेपाली सञ्चारजगत् कति हल्का र सतही रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्दै थियो ।
मैले उनीहरूलाई भेटी चढाएर प्रसन्न पार्न नसक्नुको परिणति थियो त्यो ।
‘नागरिक दैनिक’को समाचारले म व्यक्तिगत रूपमा जति विचलित थिएँ, त्यसका निरन्तरका समाचारले त्योभन्दा बढी म बलियो बन्दै गएको थिएँ । समाज कस्तो रहेछ र नेपाली समाजलाई ध्वस्त पार्न सञ्चारको हात कति महत्वपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने बुझ्दै पनि थिएँ म ।
नागरिक दैनिकको त्यो काम जति साझालाई हानी पुर्‍यायो त्यसको धेरै गुणा हानी ‘नागरिक’लाई नै भएको छ । समाजमा हावा जता बहन्छ, उतै बहने मानिस मात्रै छन्, भन्न पनि छैन । द्रौपदीको चीरहरण भएझैँ साझाको चीरहरणमा दुर्योधन र दुशाासन बनिरह्यो नागरिक पत्रिका ।
भ्रम र असत्यको खेतीपातीका बारेमा धेरैले बुझ्नुपर्दैन । थोरै केहि मानिसले बुझे पनि पुग्छ । ‘नागरिक’को हर्कत नेपाली बौद्धिक समाज र साझाका असल चिन्तकहरुले पक्कै थाहा पाएका छन् । साझामाथि निगरानी गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो कुनै तर्क छ्रैन । संस्था अधोगतितर्फ लाग्नुका कारण पत्ता लगाएर विगत र वर्तमानमा भएका भ्रष्टचारलाई आफैँ सार्वजनिक गराउनमा म लागिपरिरहेको थिएँ । त्यही कारणको नेपथ्यमा रहेको शकुनि र दुर्योधनहरु अत्तालिएर विद्याकी देवी सरस्वतीको गरिरहे चीरहरण ।
करिब तीन महिना ‘नागरिक’ ले मेरो नितान्त निजी कुरालाई जोड्दै साझाका अति सामान्य कुराहरूलाई समाचार बनाएर छाप्दैगयो । शिक्षामन्त्रीमा भर्खर नियुक्त भएका गोपालमान श्रेष्ठका पुराना मुद्दाहरू उठान गरेर मैले प्रभावमा पारेका हेडलाइनहरू बनाउन थाल्यो । मैले मन्त्रीलाई ‘नागरिक’ एक दिन उदाङ्गिन्छ, मन्त्रीज्यू तपाईले चिन्ता गर्नुपर्दैन भन्ने आँट दिन थालेँ । मन्त्री अत्तालिए ।
उनले मलाई बचाउने निहुँमा पैसा माग्न खोजेजस्तो लाग्यो । मैले साझाबाट एक पैसा खाएको भए पो पैसा खुवाईखुवाई साझामा रहनु ?
साझा जस्तो ऋृण तिर्न नसकेर पटक पटक बैङ्कले लिलामी सूचना प्रकाशन गरेको संस्थाबाट डोलेन्द्रले भ्रष्टचार गर्‍यो भनेर एउटा दैनिकले निरन्तर खेदिरहने र तालुकदार मन्त्रीले हावाका भरमा निष्कासन रोकन पैसाको आशा गर्ने अचम्मको स्थिति देखेर चकित परिरहेको थिएँ म । यो घटना नघटुन्जेल देश बन्छ भन्ने कुरामा म ढुक्क थिएँ । यसपछि मैले देश कुनै हालतमा बन्दैन भन्ने ठोकुवा गरेँ । आखिर साझाजस्तै तरिकाले नै चल्दै थियो त देश पनि ।
बिहान मसँग आएर घरखर्च गर्न पाइन लौन हजुर भन्ने सांसदले दिउँसो समितिमा गएर मेरो विरुद्ध विषवमन गर्ने गरेका घटनाले म झन स्तब्घ भएँ ।
नागरिक दैनिकले भनेका सब कुरामा थोरै प्रतिशत मात्र मिलेको भए पनि म डराउँथे अथवा सन्तोष लिने प्रयास गर्थे ।
भूतले जस्तो काम गरेको थिएँ । सब दलका विशिष्ट नेता, प्रधानमन्त्री या सरकारसाग पहुँच राख्ने कोसँग साझा बचाउन हार गुहार गरिनँ ? जब ‘नागरिक’ले साझा नाम जोडेर ममाथि खनिन थाल्यो, मैले काम गर्न सकिनँ । मन्त्रीले बर्खास्त गरेपछि मैले काम गर्ने कुरा पनि भएन । यही बीचमा साझा झन ध्वस्त भयो । कर्मचारीले फेरी तलब पाउन छोडे । काम ठप्प भयो । यदि राम्रो संस्था भएको भए संस्था नेतृत्वविहीन बन्नसाथ कामै नहुने किन हुन्थ्यो ?
आफूलाई लगाइएका कपोलकल्पित आरोपभन्दा साझाको दुर्दशाबाट आहत थिएँ म ।
‘नागरिक’ले पीतपत्रकारिताको खेती नगरेको भए र निराधार कुराहरूमा पवित्र शब्दहरूलाई खर्च नगरेको भए साझा नमुना संस्थाका रूपमा स्थापित हुन क्रममा थियो ।
अवकाश पाएका कर्मचारीले आफ्नो पाउनुपर्ने पैसा पाएका थिएनन् । काममा रहेका कर्मचारीले तलब राम्रोसँग पाएका थिएनन् । बैङ्कले लिलामको सूचना निकालिरहेको थियो । त्यही संस्थामा भ्रष्टचार भयो भनेर समाचार लेखिरहँदा त्यसका सम्पादक र तथाकथित समाचारदातालाई लुतो कन्याइको आनन्द आयो । आखिर लुतो कन्याउँदा आफ्नै शरीरमा घाउ, रगत र पीप आउँछ भन्ने बुद्धि पलाएन तिनमा ।
साझा प्रवेश मेरो जीवनको उपलब्धिभन्दा पनि इगोको विषय बन्यो । डुबेको साझा उकास्न मैले सञ्चालन गर्दै गरेको छापाखाना सित्तैंमा फ्याँक्नुपर्‍यो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलले ‘साझालाई समृद्ध गराउनु छ भने प्रेस छोड्नुस्’ भनेको एक घण्टामा सञ्चालनमा रहेको बैङ्कको ऋृण बोकेको प्रेस कौडीको मूल्यमा बेचेँ । सञ्चालनमा रहेको प्रकाशन छोडेँ ।
संस्था चलाउन चालू पूँजी थिएन । संस्था चलाउनु नै थियो । घडेरीदेखि आफ्नो जे पायो त्यही बेच्न थालेँ । यस्ता कामहरूप्रति आँखा चिम्लनु कुनचाहीँ पत्रकारिताको मर्यादाभित्र पर्छ ?
त्यही नागरिक पत्रिका हो । जसले मैले प्रेस सञ्चालन गरेको समाचार प्रकाशन गर्‍यो । अझ दुःखको कुरा साझा प्रकाशन जानुअघि मेरो बैङ्कको ऋण ६ करोड थियो । ‘नागरिक’ले मैले साझा लुटेको खबर छापिरहँदा मेरो ऋण नौ करोड पुगिसकेको थियो ।
यसको कुनै जवाफ दिन आवश्यक ठानिनँ मैले । 
मानिसले भ्रष्टचार गरेर पैसा कमाउनु पनि त आफ्नो सजिलोका लागि होला । साझामा लुटेको भए मेरो बैङ्क ऋण किन घटेन ? खोज पत्रकारिताले त मेरो सबै कुरा खोज्नुपर्ने थियो ।
भ्रष्टचारका एकोहोरो सतही कुरा मात्रै पैकाशन गरेर ‘नागरिक’ले मेरो जीवनमाथि निरन्तर खेलबाड गरिरहँदा राज्यको चौथो अङ्गमा रूपमा परिभाषित नेपाली पत्रकारिताको एउटा नाङ्गो नाच बडो निरीह बनेर हेर्न विवश भएँ । आफ्नो स्वर्थ पूरा नभएकामा साझाभित्रै केही जिउहरू श्मशानघाटमा थाल ठटाएर नाचिरहेका थिए ।
कुनै पनि मानिसको सामाजिक प्रतिष्ठा हुन्छ । जति सूचना प्रवाह गर्ने हक सञ्चारगृहलाई हुन्छ त्यति आफ्नो इज्जतसँग बाँच्ने हक कुनै पनि मानिसमा हुन्छ । नागरिकले निरन्तर झुट्टा खबर प्रवाह गरिरहँदा मेरी बूढी आमाको मन कस्तो बनेको थियो म मात्र जान्थेँ ।
दिनरात सँगै बस्ने पत्नीका आँखा आँसुको बाढी कसरी आएको थियो म मात्र साक्षी थिएँ त्यसको ।
कलिलो छोराको बालमनमा कस्ता कुरा खेल्दै थिए होलान् म मात्र आकलन गर्न सक्थेँ । यी नितान्त मेरा वैयक्तिक पारिवारिक कुरा भए पनि मानवअधिकार र सार्वजनिक चासोको विषय थियो ।
यस्तो अवस्थामा पनि म कतै भागेको थिइनँ । समाजमै थिएँ । म अहिले सम्झन्छु – एक जना मेरा पत्रकार मित्रले ‘तपाईं त झुन्डिने अवस्थामा पुग्नुभएको छ, तैपनि सामान्य जीवनमै हुनुहुन्छ’ भनेको ।
म त्यसदिन घरमा आएर एक्लै रोएर मन हल्का बनाउने प्रयास गरिरहेको थिएँ । मैले मर्नैपर्ने अपराध गरेकै थिइनँ । दिनदिनै अपराधका खबर आइरहँदा मेरी आमा, पत्नी या आफन्तहरूलाई पनि समाचारको विश्वास बढ्न थाल्यो होला ।
तर मसँग साझामा सँगै रहेका कर्मचारी र साझा अनि मलाई चिनेका साथीहरु मेरो निर्दोष कर्म अपराधमा परिणत बनाईँदै गएको भयावह अवस्था हेर्दै मलाई जितको ढाडस दिँदैथिए । म उनीहरूप्रति कृतज्ञ थिएँ । मेरो निर्दोषतालाई राम्ररी बुझेका केही मित्रहरू, साझाका केही सञ्चालकहरू र साझाकै केही कर्मचारीहरू थिए तर अध्यक्ष र महाप्रबन्धकका नाताले कुरूप नियति भोगिरहेको एक्लो बृहस्पति थिएँ म ।
मित्रवरका सान्त्वना एक ठाउँमा थिए । यही बीचमा दसैं आयो । मैले आमाका हातबाट कसरी टीका थाप्नु ? मनमा अनेकन् कुराहरू हुरीजस्तै मडारिए । सासूआमाका हातबाट असल ज्वाइँ बनेर कसरी आशिष् लिनु ? टीका लगाइदिँदै आमाहरू रुन थाल्नुभयो भने मैले आफ्नो मनसँग हारिसकेको थिएँ । दसैमा दुबई गएर मन बहलाउने काम गरेँ । तर एउटा जिम्मेवार भएको सञ्चारगृहले दिएको पीडा जहाँ गए पनि शान्त हुने स्थिति थिएन । म बन्स सकिनन र तुरुन्तै फर्किएँ ।
समाजमा कसैले पनि अपराधी बन्नु हुँदैन र पत्रकारले पनि त अपराध गर्न हुँदैन होला । नागरिक दैनिकले म र मेरो परिवारमाथि अपराध गर्‍यो अदालतले मलाई निर्दोष ठहर्‍याएर मलाई राहत दिलाए पनि नागरिक दैनिकले म र मेरो परिवारमाथि गरेको खेलबाडको क्षतिपूर्ति कहाँ खोज्ने ? सञ्चारले नै हो समाजलाई बाटो देखाउने, राज्यलाई खबरदारी गर्ने, तर त्यही क्षेत्रले बाटो बिराउँदा नियमत गर्ने निकाय खोइ ?
एक दुई जना र एक दुई संस्थाका कारण सिङ्गो क्षेत्र बदनाम हुनु राम्रो होइन । आरोपै मात्र लगाउने र तयसलाई प्रमाणित गर्नुनपर्ने हो भने म गुणराज लुईँटेललाई हजार आरोप लगाउन सक्छु । विनोद ज्ञवालीलाई गन्नै नसक्ने आरोप लगाउन सक्छु । तर एक विवेकशील नागरिकका हैसियतले मलाई यस्तो हर्कत गर्न सुहाउँदैन ।
कुकुरले मान्छेलाई टोक्यो भनेर मान्छेले कुकुरलाई टोकन जाने प्रवृत्तितिर म लागिनँ; यसैमा आत्मसन्तोष छ मलाई । पछिल्लो समयमा मैले मिडियामा आउने तथ्यविनाका असत्य समाचारको पछि लाग्न छाडिदिएँ । आफूले गल्ती गरेको भए गलिन्थ्यो, कुहिन्थ्यो । गल्ती नगरेकाले एक–दुई फट्याङ्ग्राहरू उफ्रिँदै गर्छन् भन्ने सोचेर मौनमौन रहेँ म ।
यस मौनताभित्रको सत्य लुकेर रहनु हुँदैन, मौनताभित्रको तथ्य छोपिनु हुँदैन र सत्यलाई सुगन्ध लेपिएको कालो आवरणले ढाकेर राख्नु पनि हुँदैन भन्ने कुराबाट दीक्षित थिएँ म । यही दीक्षा आदर्श हो मेरो जीवनको । शिक्षा हो मेरो जीवनको र आगतका लागि पाठ हो मेरो जीवनरूपी पाठशालाको । यिनै शिक्षा, दीक्षा र पाठहरूबाट नदीको प्रवाहजस्तै बनेको छ जिन्दगीको यात्रा ।
– साझा प्रकाशनका अध्यक्ष डोलिन्द्रप्रसाद शर्माको हालै बिमोचित ‘बादलभित्रको घाम’ नामक पुस्तकबाट ।
डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा साझा प्रकाशन